यस कारण नेशनल प्याब्सन काठमाडौँको अध्यक्षका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ! | KTM Khabar
यस कारण नेशनल प्याब्सन काठमाडौँको अध्यक्षका लागि मेरो उम्मेदवारी हो !
२०७३ फागुन २५ गते ०८:३१ मा प्रकाशित
नारायण कुमार कार्की-
नेशनल प्याब्सन एक विशुद्ध व्यवसायिक संगठन हो । यसले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरुको हक–हित, संरक्षण, सम्बद्धन, समृद्धि तथा विविध समस्याहरु उपर निराकरण तर्फ वकालत गर्दछ ।
नेशनल प्याब्सन नेपाल सरकारको अव्यबहारिक शैक्षिक नीतिले छटपटाई रहेको निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु प्रति गम्भीर छ ।
पैसा, क्षमता र जनशक्तिलाई स्वदेश कै माटोमा परिचालन गरी कर्म गर्न र राष्ट्र प्रति समर्पित हुन समेत गराउनु पर्नेमा निजी शिक्षा क्षेत्र भने समस्याहरुमा ग्रसित हुन पुगिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको थाप्लोमा विश्वब्यापी मान्यता र बालबालीकाको नैसर्गीक अधिाकार विरुद्ध लगाईएको १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क उच्च शिक्षामा आश्रित ४५ प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नपाउने गरी ल्याईएको प्रतिबन्ध अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने १० प्रतिशत छात्रबृत्तिको व्यबस्था शुल्क निर्धारणको अव्यबहारिक व्यबस्था, शिक्षा नियामावली, २०७३ का मस्यौदामा देखिएका कठोर नीतिहरु, अत्याधिक राजनीतिकरण र हस्तक्षपले नीजि क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त र निरुत्साहित पारेको अस्था छ ।
नेपाल सरकारको नेपाली लगानीको सुरक्षा, संस्था माथिको स्वामित्व, सुरक्षा, उपयुक्त वाताबरण र नीति नियमबारे कुनै प्रवाह नगरी वैदेशिक संस्थाहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने लगाउने, विश्व स्तरिय शिक्षा प्रदान गरिरहेका नेपाली शिक्षण संस्थाहरुलाई यो वा त्यो नाममा नियमन भन्दै नियोजित गर्न खोज्ने र विदेशी शिक्षण संस्थाहरुले विभिन्न बहाना, प्रलोभन, प्रभावबाट आकर्षणमा हजारौको संस्थामा विद्यार्थीहरु लैजाने क्रम किन रोकिएन ?, बरु तिनै मौकामा भल सोहर्न पल्केकालाई फाईदा पो भईरहेको छ कि ?
नेशनल प्याब्सन काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिले सुधार गर्नु पर्ने कार्यनितिहरुः
विद्यालय र विद्यार्थी केन्द्रित उल्लेखनिय गतिविधिहरु बनाउँनु पर्ने ।
बार्षिक नविकरण शुल्क नियमित गराउँनु पर्ने ।
संख्यात्म तथा गुणात्मक रुपमा सदस्यता बृद्धिका लागि ठोस पहल गर्नु पर्ने ।
संगठन तथा विद्यालय र विद्यालय–विद्यालय विच समन्वय गराउनु पर्ने ।
संगठन प्रति आकर्षण बढाउँन निरन्तर र अविच्छिन्न रुपमा क्रियाकलाप तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
विद्यालयहरुलाई सक्रिय बनाउँदै संगठन गतिशील, चलायमान बन्दै यसलाई जीबन्तता प्रदान गर्नु पर्ने ।
आर्थिक तथा भौतिक रुपमा संगठनलाई सबल बनाउँनु पर्ने ।
नेशनल प्याब्सन काठमाडौँ जिल्लाको आफ्नै घडेरीमा निर्मित कार्यालय भवन बन्नु पर्ने ।
नीजि विद्यालयहरुले निश्चित समय अवधि भित्र आफ्नै जग्गा जोड्ने नीति फलामको चिउरा हुनेछ । यसमा राज्यले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी निजी विद्यालयहरुलाई सर्बसुलभ ब्याजमा जग्गा उपलब्ध गराउँने वा दिर्घकालिन भाडामा उपलब्ध गराउने तर्फ पहल गर्नु पर्छ ।
विद्यालयहरुको स्तर उन्नतिका निमित्त सर्वसुलभ रुपमा बैकिङ्ग कर्जाको सुविधा लिन सक्ने तर्फ पहल पैरवी गर्न आवश्यक छ ।
विद्यालयहरुमा के कसरी संस्कारी शिक्षा दिन सकिन्छ ? भन्ने सवालमा सरकार र संगठनहरु विच साझा बहस तथा गोष्ठिको आयोजना गर्नु पर्ने तर्फ बहस चलाउनु पर्छ ।
(लेखक नारायण कुमार कार्की वर्तमान नेशनल प्याब्सन काठमाडौँ कार्यसमितिका उपाध्यक्ष एवं नेशनल प्याब्सन काठमाडौँको छैठौँ अधिवेशनका अध्यक्षको उम्मेदवार हुन ।)